Global Voices teny Malagasy » Fampahafantarana Bebe Kokoa Momba Ny Fitazonana An’i Abdolkarim Suleiman · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Oktobra 2018 11:35 GMT 1	 · Mpanoratra Ethan Zuckerman Nandika Nancy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Novambra 2005)
Avy any Kairo, toerana hanaovany ezaka maro momba ny zon'olombelona no anoratan'ny namantsika Elijah Zarwan. Vao avy tany Aleksandria izy nihaona tamin'i Mohammed Morsi  sy Malek Moustafa , egiptiana mpitoraka bilaogy izay niasa mafy tamin'ny fanadihadiana ny fisamborana sy ny fitazonana an'i Abdolkarim Suleiman. Elijah, Mohammed, Malek ary mpiaro ny zon'olombelona anankiray no nihaona tamin'ny fianakavian'i Suleiman, niezaka ny hahafantatra bebe kokoa momba ilay raharaha – eto ambany manaraka eto ny tatitra sy ny fanadihadiana ny zava-misy nataon'i Elijah.
Efa nandefa lahatsoratra momba ny fitazonana an'i Suleiman izahay tany aloha, toy ny -Justice for Abdolkarim  (Rariny ho an'i Abdolkarim ) sy ny Egyptian Blogger Taken in Detention  ( Bilaogera Mpitoraka Bilaogy Egiptiana Nofonjaina ).
Ny 26 Oktobra 2005 tamin'ny 3 ora maraina, nosamborin'ireo mpitandro filaminana nanao fitafiana sivily tao an-tranony tany Muharram Bek, distrikan'i Aleksandria, izay toerana nisian'ny fifandonana teo amin'ireo antokom-pivavahana roa ka nahafatesana olona nandritra ny tapa-bolana lasa i Abdolkarim Suleiman. Nanao sava hao ny tranon'i Suleiman ireo mpitandro filaminana, izay tsy nampiseho taratasy manome fahefana azy, ary nogiazany ireo dikan'ny asa-sorany amin'ny aterineto natonta. Namoaka lahatsoratra amin'ny bilaogy sy lahatsoratra manohitra ny heloka bevava ho fiarovam-boninahitra, ny fanerena hametraka niqab ( voaly manarona ny tena manontolo), ny fanimbàna ny taovam-pananahan'ny vehivavy, ary manohitra ny governemanta i Suleiman izay nianatra ny ‘jurisprudence” silamo tao amin'ny oniversiten'i Al-Azhar. Lasa mpikatroka mafana fo tao amin'ny hetsika Kifayah izy tamin'ny aogositra 2005. Ny 22 Oktobra, rehefa nifandona tamin'ny mpitandro filaminana ireo mpikomy teo amin'ny nanodidina an'i Suleiman, dia nanao tatitra momba ilay fikomiana i Suleiman, ary nanakiana ireo mpikomy sy ny silamo. Afaka andro vitsivitsy, dia nolazain'ny fianakaviany fa notafihina i Abd al-Karim ary nodarohana tanora zazalahy avy ao amin'ilay faritra. Heverin'i Abd al-Hady, rahalahin'i Suleiman fa fitorohana nomen'ireo tanora ao amin'ny faritra no niasan'ireo mpitandro filaminan'i Aleksandria .
Tsy nahitam-bokany avy amin'ny Fiarovana ao Aleksandria ireo ezaka im-betsaka nataon'ireo fianakaviana sy ilay mpiaro zon'olombelona aleksandriana, Mohammed Khaled Al-Tunsi, hahazoana vaovao bebe kokoa momba ny raharaha Suleiman. Tamin'ny 6 Novambra, niverina tany an-tranon'i Suleiman indray ny mpitandro filaminana ary nilaza tamin'ny fianakaviany fa any amin'ny fonja tsy fantatra no itazonina azy ho toy gadra politika. Tsy nofaritany mazava ny vesatra hitazonana azy. Tamin'ny 8 Novambra, nantsoin'i Al-Tunsi indray ny Fiarovana an'i Aleksandria mba hahazoana vaovao momba ilay raharaha. Nilazan'ilay olona nandray azy izy fa tokony hiverina ry zareo, nefa hatramin'ny 11 ora alina ny 8 Novambra, tsy tafaverina ry zareo.
Hatramin'ny nitsidihan'ny mpitandro filaminana ny tranon'i Suleiman fanindroany dia tsy te-hiresaka momba ilay raharaha intsony ny fianakavian'i Suleiman. ( Izahay — ireo mpitoraka bilaogy Mohammed Morsi sy Malek Moustafa, ilay mpisolovava Al-Tunsi ary izaho — dia nandany ny alina niezaka ny nanambitamby azy ireo mba hiresaka. Afaka niresaka kely tamin'ny reniny ihany i Al-Tunsi, saingy tsy nety nanampy intsony izay efa voalazany izy. Efa nifamotoana tamin'ny zoky lahimatoan-dry Abd ai-Karim izahay amin'ny 11 ora alina, nefa tsy nitranga izy, fa nolazain'ny reniny fa niala tao an-trano izy tamin'ny 10:45 mn alina)
Na gadraina tsy ara-dalàna i Suleiman na nogadraina noho ny lalàna noho ny lalànan'ny tany misahotaka . Raha nosamborina ara-dalàna noho ny fanitsakitsahana fehezan-dalàna famaizana i Suleiman, dia ireo mpitandro filaminana avy amin'ny manodidina an'i Muharram Bek no tokony ho nanao ny fisamborana. Tsy maintsy alefan-dry zareo any amin'ny mpampanoa lalàna izy ao anatin'ny 24 ora. Avy eo, tokony hanadihady sy hamaritra ny daty hitsaràna azy ny mpampanoa lalàna.
Ankehitriny manana safidy roa ny Fiarovana ao Aleksandria : ny azony atao, na mitàna an'i Suleiman araka ny fepetra takian'ny lalànan'ny tany misahotaka izay manome alàlana ny fitazonana tsy misy vesatra anenjehana ireo olona heverina ho manelingelina ny filaminam-bahoaka, na manenjika azy noho ny fitenenany ratsy ny fivavahana na
fandrisihana adin'antokom-pivavahana araka ny voafaritra ao amin'ny Andininy faha 98F ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana (lalàna laharana faha- 29 tamin'ny 1982 manasazy enina volana ka hatramin'ny dimy taona, na onitra 500 ka hatramin'ny 100 LE noho ny ” fanararaotana sy fampiasana ny fivavahana ho fiarovana sy fanaparitahana amin'ny alàlan'ny teny na
soratra, na fomba hafa, ny fisainana mahery fihetsika mikendry ny handrisika fikomiana sy fisarantsarahana na hanambany na hanao tsinontsinona ny iray amin'ireo ‘ fivavahan'ny lanitra’ [i.e Silamo Kristiana, Jodaisma] na ireo antokom-pivavahana nisintaka tamin'izany, na manohintohina ny firaisam-pirenena na ny filaminana ara-tsosialy”). Manaiky ny mpiaro an'i Suleiman fa ny lahatsorany tamin'ny 22 Oktobra  dia manivaiva ny silamo ary raha raisina ny zavamisy momba ny adin'antokom-pinoana ao Aleksandria, dia azo adika hoe ‘ fanohintohinana ny firaisam-pirenena sy ny filaminana ara-tsosialy” .
Ity safidy farany ity no mety hitondra fahombiazana kokoa ao Egypta, izay tsy ankasitrahan'ny olona loatra ny lalànan'ny tany misahotaka ary tena tian'ny olona ny silamo, saingy mety hamadika azy ho anton-javatra malaza any ivelany izany, indrindra fa amin'ireo finoana mpandala ny fomba nentim-paharazana any Etazonia. Mety hitondra loza ny fanagadrana an'i Abd al-Karim noho ny lalànan'ny tany misahotaka : tamin'ny fampielezankeviny ho amin'ny fifidianana azy indray ho filoham-pirenena tamin'ity fahavaratra ity, dia nampanantena ny filoha Hosni Moubarak fa atsahatra aloha ny lalànan'ny tany misahotaka manome vahana ny lalàna manohitra ny asa fampihorohoroana ary holaniana ny lalàna manamafy ny zon'ny olom-pirenena ho amin'ny làlana marina sy haingana. Ny firesahana ny lalànan'ny tany misahotaka, indrindra fa amin'ny tranga maha-be resaka tahaka izao, fotoana fohy aorian'ny fifidianana dia mety hampandainga ilay fampanantenana fanavaozana sady mety hampitolagaga ny any ivelany.
Tsy mbola niantso herisetra tamin'ny silamo i Suleiman. Ary tsy nisy herisetra tahaka izany ihany koa tao amin'ny lahatsorany. Tsy azo heverina loatra fa vakiana malalaka any Muharram Bek ny bilaoginy, ny geja ara-toekarena mahazo ny mpiasa madinika manodidina no mampahàlana ny fampiasàna aterineto. Na i Suliman aza dia tsy manana solosaina ka namahana ny bilaoginy avy any amin'ny cybercafé ao an-toerana. Tsy tompon'andraikitra tamin'ny herisetra tao amin'ny faritra misy azy i Suleiman, ary tsy hamaha ihany koa ireo olana nahatonga izany ny fanagadrana azy.
Ny resaka maha-ara-dalàna ny fanagadrana an'i Suleiman etsy andaniny, ireo manampahefana egiptiana izay manao fanadihadiana tombatombana ny amin'ny mbola hitazonana an'i Suleiman, dia tsy maintsy mamoaka fehinkevitra fa tsy misy antony hitazonana azy. Efa nisarika fisainana maro avy ao an-toerana sy ireo vondrona iraisam-pirenena miaro ny zon'olombelona ary ny haino aman-jery ny fitànana azy.
Singanina manokana ny andro mialoha ny Fihaonambe Iraisam-pirenena momba ny orinasan'ny fampahalalàm-baovao, tamin'izany no nahafahan'i Egypta nanolotra ny tenany ho mpitarika ny faritra izay miezaka mampiroborobo ny orinasan'ny fampahalalàm-baovao, mety hiteraka olana ho an'ny governemantany ny tranga mahazo an'i Suleiman.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/26/128361/
 Mohammed Morsi: http://digressing.blogspot.com/
 Malek Moustafa: http://malcolmix.blogspot.com/
 Justice for Abdolkarim: http://cyber.law.harvard.edu/globalvoices/2005/11/04/justice-for-abdolkarim/
 Egyptian Blogger Taken in Detention: http://cyber.law.harvard.edu/globalvoices/2005/11/03/egyptian-blogger-taken-in-detention/
 lahatsorany tamin'ny 22 Oktobra: http://karam903.blogspot.com/2005/10/blog-post_22.html